Fabregas oo doortay liiska macalimiintii ugu fiicneyd ee uu la soo shaqeeyay… (Guardiola oo ka maqan, Miyuu ku jiraa Mourinho?) – Gool FM
Dajiye April 1, 2020
(Yurub) 01 Abril 2020. Xiddiga qadka dhexe reer Spain iyo kooxda Monaco ee Cesc Fabregas ayaa ka reebay Pep Guardiola liiska macalimiinta ugu fiican ee uu la soo shaqeeyay intii uu ku guda jiray xirfadiisa, xilli uu ku soo daray liiskan macalinka reer Portugal ee Jose Mourinho.
Kahor inta uusan u ciyaarin Cesc Fabregas kooxdiisa haatan ee Monaco, wuxuu sidoo kale soo maray Arsenal, Chelsea, iyo Barcelona.
Cesc Fabregas wuxuu la soo shaqeeyey macallinka reer Spain ee Pep Guardiola waayihiisii kooxda Barcelona, gaar ahaan xagaagii 2011, kaddib markii uu kaga soo biiray naadiga reer London ee Arsenal.
Inkastoo uu Cesc Fabregas la qaaday kooxda Barcelona 6 koob, ee kala ah horyaalka La Liga hal jeer, Copa del Rey hal jeer, Super Cup Spain laba jeer, UEFA Super Cup iyo FIFA Club World Cup oo min hal jeer ah, haddana Fabregas ayaan ku soo darin Guardiola liiska macalimiinta ugu wanaagsan uu la soo shaqeeyay xirfadiisa.
Cesc Fabregas ayaa muuqaal toos ah uu ka soo galay boggiisa rasmiga ah ee Instagram-ka wuxuu ka hadlay dhowr arrimood, waxaana uu yiri:
“Waxaan la shaqeeyay macalimiinta ugu fiican adduunka, sidaas darteed ma qabo wax dood ah”.
Mar wax laga weydiiyay tababarayaasha ugu fiican ee uu la soo shaqeeyay intii uu ku guda jiray xirfadiisa, waxa uu ku jawaabay:
“Arsene Wenger iyo Jose Mourinho.”